Musqmaasuq iyo KASTAMYADA dawladda |
Kastamyadu badanka waa haayad madaxbanaan (authority Agency) ama waa wax (department) hoos timaada Waasaradda Maaliyadda/Dakhliga/Ganacsiga. Kastamyadu waxa ay maamulaan isu socodka alaabaha iskaga gudbaya dalalka caalamka, hadii ay soo degayaan (Import), dhoofayaan (export) ama ay gudbayaan (transit). Kastamyadu taariikh ahaan waa haayadaha ugu da’weeyn ee ay dawladuhu leeyihiin, dawlad kastena waxa ay ugu jiraan kaalin muhiim ah, marka loo eego shaqooyinka ay qabtaan culeeyskooga iyo muhiimadooda.
Ø Ilaalinta amniga dalka, deegaanka iyo dadkaba.
Ø Fullinta sharciyada iyo habraacyada (procedures) kastamyada ee dalka u dejisan.
Ø Dakhli abuur ama dakhli soo saaris.
Ø Hubinta bad-qabka alaabta dalka soo galaaysa.
Ø Fududeeynta isu socodka ganacsiga (Trade Faciliation).
Ø Ilaalinta wax-soosaarka dalka (warshadaha iyo beeraha).
Ø Ka hor-toga iyo la-dagaalanka alaabta sharcidarada ah (contraband).
Ø Joojinta alaabaha la mamnuucay (prohibited goods) in ay dalka soo galaan.
Ø La socodka iyo hubinta alaabaha la xadiday (restriction goods) tirada iyo tayada dalka soo gali karta.
Ø Ururinta iyo keeydinta xogta ganacsiga.
Ø Lunsi cashuureed: waxa si aan sharciga waafaqsaneeyn alaab looga dhimaa ama looga dhaafaa cashuur ku waajibatay.
Ø Aqballidda waraaqo been abuur ah: kuwaas oo laga dhigayo, kuwa rasmi ah, oo sharci ah.
Ø Sii deynta alaab ka mamnuuc ah in ay dalka soo gasho: alaabtaas oo amaanka dalka, bad-qabka deegaanka, caafimaadka dadka ama wax-soosaarka dalka dhib u geeysan karta.
Ø Cashuur ka dhimis: in cashuurta laga dhimo alaab la rabo in ay la tartanto wax-soosaarka dalka, taasi oo sharciguna ku waajibiyey cashuur badan, si loo xadido soo dhoofinteeda.
Ø Fududeynta koontarabaanka: waxa alaab dalka loo soo galiyaa si sharciga aan waafaqasaneyn, iyadoo aan kastamka la soo marin, saraakiisha kastamyaduna iska indho-tiraan.
Ø Marka sharciyada lagu shaqeeynayo ay yihiin kuwo fahamkoodu aad u adagyahay, sidoo kalena ay yihiin kuwa aan daah-furneyn (transparent).
Ø Marka hab-raacyada la maraayo ay yihiin kuwa badan oo aan koobneeyn.
Ø Marka canshuuraha ku dhacaya alaabtu ay yihiin kuwa qaali ah.
Ø Marka maamulka kastamyadu ay yihiin kuwa jilicsan, maamul ahaan iyo awood ahaanba.
Ø Marka isla xisaabtanka iyo daah-furnaanta shaqadu ay tahay mid daciif ah.